केपी ओलीलाई अरबबाट नेपाली कामदारले पठाए मनछुने खुला–पत्र | नेपाल आज
केपी ओलीलाई अरबबाट नेपाली कामदारले पठाए मनछुने खुला–पत्र
मेरो प्रिय नेता !
तपाईंको स्वस्थ–लाभको कामना सधैँ गरिरहेको हुन्छु र गरिरहनेछु । मैले देखेका र भेटेका नेतामध्ये मेरो मनले प्रिय ठानेको नेता हो तपाई।नियमित स्वास्थ चेकजाँचको लागि हजुरको यो ’बैंकक’ यात्रा अन्तिम बनोस् ।
मलाई थाहा छ तपाईको अबको एउटै सपना भनेको ‘नेपाल’ देशलाई समृद्ध बनाउने मात्रै छ । मर्नुभन्दा अगाडि आफ्नै आँखाले समृद्ध देश हेरेर मर्ने तपार्इंको सपना छ । म ‘दुबई’ आउने दिन तपाई संगको भेटमा पनि यहीँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो ।
अहिलेको युगमा असम्भव भन्नेकुरा एकादेशको कथा जस्तै भैसकेको छ । मानिसले चाहे जेपनी गर्न सक्छ । बस ! उसमा आँट, साहस र हिम्मतको भोक जरुरी छ । म तपाईलाई दक्षिण अफ्रिकाको अध्यारो हटाउने ’नेल्सन मन्डेला’ बनेको हेर्न चाहान्छु ।
म तपाईंलाई सिङ्गापुर देश समृद्ध बनाउने ’लिक वान’ बनेको हेर्न चाहान्छु । हो, म तपाईलाई मलेसियालाई विश्वको आकर्षणको केन्द्र बनाएका ’माथिर बिन महम्मद’ बनेको हेर्न चाहान्छु ।
हो ओली ज्यू,
म तपाईलाई बिश्वकै शक्तिशाली देश बनाउने ’रसीया’का ’ओटो भान बिस्मात’ बनेको हेर्न चाहान्छु । त्यसैले ओली ज्यू ,म तपाईंको स्वास्थ लाभको सधैँसधैँ कामना गरिरहन्छु ।
अब देश बनाउनु छ । देश बनाउन तपाई स्वस्थ हुन जरुरी छ । त्यसैले तपाईको स्वास्थ उपचार राम्रो होस् । अबको बैंकक यात्रा अन्तिम बनोस् । किनकि अब देशमै खोल्नु छ तपाईंले उपचार गर्ने गरेको बैंककका त्यस्ता थुप्रै अस्पतालहरु । हुम्ला, जुम्ला र कालिकोटका जनताहरु एउटा सिटामोल नपाएर मर्नु परेको समाचारहर पढ्नुपर्ने दिनको अन्त्य गर्नुछ ।
तपाईको देशको एउटा रेमिटान्स नागरिक बिगत ६ वर्षदेखि यै सपना देखेर परदेशमा बसिरहेको छ ओली ज्यू । यो सपनानालाई बिपनामा परिवर्तन भएको आफ्नै आँखाले हेरेर मर्ने मेरो पनि ठूलो धोको छ ।
त्यहीँ दिन हेर्नको लागी भित्तामा टाँसिएका भगवानका तस्बिर अगाडि हात जोड्दै म तपाईको स्वस्थ लाभको कामना गरिरहेको हुनेछु । तपाई छिट्टै निको भएर देश समृद्ध बनाउने नक्सा कोर्दै देश बनाउने यात्रामा अगाडि बढ्नुहोला । तपाईको प्रत्येक कदममा करोडौं जनताको भविष्य जोडिएको छ ।